Habka ugu Fiican ee looga Safro Amsterdam iyo Berlin By Train | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Habka ugu Fiican ee looga Safro Amsterdam iyo Berlin By Train
Habka ugu Fiican ee looga Safro Amsterdam iyo Berlin By Train
Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, safarka Europe
Ku safridda Amsterdam iyo Berlin tareenka waxay u yaboohay socotada khibrad aan la ilaawi karin iyo doorashada ugu saaxiibtinimo ee Eco. Inkastoo lix saac safarka waa xoogaa gaabis ah, raaxada ay bixiyaan tareenka iyo soo jiidashada ee safarka waa u fiican. Iyadoo muuqaal qurux badan jidka, iyo baabuurta cuntada ah si ay u caawiyaan waqtiga noqotay, safarka ilaa uu dhammaado isagoo inta ka dhaqso badan intii la filayay. Halkan waa maxay tareenada ee Europe bixiyaa wadada this.
Imaanshaha casri ah Hauptbahnhof (HBF) marka aad ka safreyso Amsterdam una aado Berlin ama Berlin aad Amsterdam tareenka, waa adag tahay in aan ka heli faraxsan oo ku saabsan safarka in ka hor been. Idaacadda waa qaab-dhismeedka bir ah dhowr dabaq, halkaas oo tareen gudbo madaxaaga iyada oo biraha ganaax. Waxaa aad u wanaagsan ku xiran inta kale ee magaalada dhex mara oo metro iyo baska Idaacadda, ee xarunta of Berlin. Haddii aadan jaale hoyga ee Berlin, dookh fiican daqiiqadii ka idaacadda maqan yahay Hotel Intercity ah.
Berlin ilaa Amsterdam Waxaa qoray Train
Markii aad ka tagto Amsterdam una aado Berlin tareenka, aad soo gashid Dhexe Station caanka ah ee Amsterdam, mid ka mid ah dhismayaasha walbaana ee magaalada, iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha ee Schipol. si fudud loo heli, ah Central Station la dhisay 1889, oo maanta helo oo ku saabsan 250,000 rakaab ah maalin kasta. Idaacadda ayaa waxaa si aad u wanaagsan webk. Haddii aadan ku hadlin Dutch, kaliya xusuusnow in magaca madalku yahay “track”. Haddii loo baahdo, aad dhexdeeda kartaa qaar ka mid ah English, tan iyo shaqaalaha ee saldhigga ku hadla luqadda. Amsterdam, doorasho wanaagsan ee hoyga u dhow saldhiga dhexe waa Style Ibis ah. Waxaa, meesha waa qumman yahay, maxaa yeelay, tareenka waa xaq ee xarunta, u dhow meelaha xiisaha.
Tikidhada tareenka ee Amsterdam ilaa Berlin
Amsterdam Si Berlin By tareenka
Adeegga tareenka ee Amsterdam illaa Berlin tareenka waa mid aad u soo noqnoqda, oo waxaa jira ah oo ku saabsan laba tareen saacaddiiba. tareenada maalin badankoodu waxay bixiyaan adeeg aad u raaxo, laakiin xoogaa gaabis ah, sida ay joojiyaan in dhowr magaalo oo jidka. Tareenka ayaa marka hore ka Amsterdam si Berlin ka tago garoonka 6:58 waxaan ahay, imaanaya magaalada Jarmal ee 13:20. From Berlin si Amsterdam, tareenka ugu horeysay ka tago garoonka 06:37 iyo Gaaray 13:08. Qaybta ugu wanaagsan ee safarka lagu jiro maalinta, oo aan shaki ku, waa Bbc ah. magaalo yar oo ku taal gudaha ee Germany iyo Netherlands, iyo sidoo kale buuraha iyo muuqaalka miyiga, waa gabi ahaanba breathtaking!
Amsterdam ilaa tikidhada tareenka ee Brussels
Amsterdam tigidhada tareenka London
Amsterdam tigidhada tareenka Paris
fursadaha fadhiga The on tareenka ka Amsterdam si Berlin waa kala duwan. safafka waxay ka kuraasta caadiga ah in ay weliba qolalkii hoose qaboojiyaal in ay leeyihiin kuraasta dangiigsan iyo xataa badalo si sariirood. Tan iyo markii ay safar dheer yahay, safri in mid ka mid ah weliba qolalkii hoose, kuwaas oo, oo bixisa taas sii dheer sida nuurka, gacanta ku heerkulka iyo gelanayo for laptops iyo telefoonada gacanta, taas oo ka dhigaysa waxaa suurto gal ah si uu u daawado filimada ee raaxada ee aad qol intii ay safarka oo dhan. Xusuusnow in aad soo iibsato ugu yaraan laba tigidh aad todobaad ka hor si aad u hubiso in dhibaato ah ma dhacdo ka dhigi.
Waxaan ugu hubaal waa hubaal in aad Khayrja doonaa kortaan ka soo Amsterdam si Berlin, iyo qeybsanaan ku xigeenka. Haa, waxaa jiri doona safar kale sababtoo ah mar aad isku dayi markii ugu horeysay, aad had iyo jeer u baahan doontaa in tareenka mar kale la qaado oo si buuxda u raaxaysan safarka.
Sidaas, aad diyaar u tahay safarka tareenka inta u dhaxaysa Netherlands iyo Jarmalka tareen? haddii ay sidaa tahay tikidhada tareenkaaga nala soo xiriir 3 daqiiqo, at heerka ugu jaban iyo gargaartay ajuurada jaale isnacsiiyeen!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Famsterdam-berlin-train%2F%3Flang%3Dso- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / NL ama / iyo luuqado badan / de si.
tareen safarka travelamsterdam travelberlin travelgermany travelnetherlands traveltips
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareen Travel The Netherlands, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Iswidhan, Tareenka Safarka Switzerland, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe